स्वास्थ्यमा के–के फाइदा भुइँकटहरका ? कसले खान हुँदैन ? - ज्ञानविज्ञान
भुइँकटहरको खेती कहाँबाट सुरु गरिएको हो भन्नेबारे त्यति स्पष्ट छैन । तर यसलाई क्रिस्टोफर कोलम्बसले विश्व भ्रमणपछि सन् १४९३ मा यसलाई युरोप भित्र्याएको अनुमान गरिन्छ । पहिले अमेरिकाको हवाइमा यो ठूलो परिमाणमा उत्पादन हुन्थ्यो । अहिले धेरै देशहरुमा भुइँकटहर उत्पादन हुन्छ । उत्पादनका हिसाबमा भने अहिले पाराग्वे, ब्राजिल, फिलिपिन्स, कोस्टारिका लगायतका देशमा भुइँकटहरको धेरै खेती हुने गरेको छ ।
स्वास्थ्यको फाइदाका हिसाबले भुइँकटहरलाई अदभूत फल मानिन्छ । स्वादमा मिठो हुनुका साथै यसले स्वास्थ्यमा पुर्याउँने फाइदा पनि धेरै नै विशेष छ । यहाँ हामीले त्यस्तै फाइदाहरुका बारेमा जानकारी लिएर आएका छौँ । आशा छ, तपाईले पुरा पढेर यसको फाइदाका बारेमा जानकार हुनु हुनेछ ।
स्वास्थमा हुने फाइदाहरु
१.पोषक तत्वको भण्डार
२.रोगप्रतिरोधी क्षमतामा वृद्धि
३.आर्थराइटिस (बाथ) मा उपयोगी
५.पाचन प्रणाली मजबुत पार्छ
६.खोकी र रुघामा उपयोगी
७.हड्डी मजबुत पार्छ
८.घाउ चाँडो निको पार्छ
९.भुइँकटहरका अन्य फाइदा
यसो त कसै कसैलाई भुँइकटहरको एलर्जी पनि हुन सक्छ । आफुलाई भुँइकटहरको एलर्जी वा साइड इफेक्ट छ कि भन्ने थाहा पाउँन पनि सजिलो छ । यो तलका कुनै पनि लक्षण भुइकटहर खाए पछि देखियो भने तपाईलाई भुइकटहरको एलर्जी भएको हुन सक्छ । ध्यान दिनुहोला ।
दहीसँग वा नूनसँग फलफूल खाँदा गजब हुन्छ तर एसिडिटीको समस्या छ भने चाहिँ सलाद खानुहुँदैन । बिहान खाली पेट फलफूल खाने सबभन्दा सही समय हो ।
शरीरलाई कुनै पनि आहारको पोषक तत्त्व पचाउनका लागि एन्जाइम आवश्यकता हुन्छ । खाली पेटमा फलफूल खाँदा शरीरका एन्जाइमले फलका पोषक तत्त्व सजिलै पचाउँछन् ।
खाना खानेबित्तिकै फलफूल खानुहुँदैन । भरिएको पेटमा फलफूल खाँदा पच्दैन । पेट पोल्ने, अपच, भारी हुने जस्ता समस्या यसबाट आइलाग्छन् । त्यसैले खाना खाएको तीन घन्टापछि मात्र फलफूल खानुपर्छ ।
हामीले फलफूल र सागसब्जी बोक्रैसँग खाए बढी पोषण पाउने निश्चित
Don't Miss it यति कुरा याद गरेर दिनरात मोबाइल कम्युटर चलाए पनि आँखालाई केहि हुदैन, जानिराखाैँ
Up Next स्वस्थ भएर लामो आयु बाँच्न बिहान के गर्न हुदैन र के गर्नु पर्छ ?
विधार्थीले आफ्नाे रिजल्टलाइ कसरी लिने ? जान्रुहाेस्
विध्यालय हाेस् या कलेज लेभल, विध्यार्थीलाइ परिक्षा र नतिजा विशेष हुन्छ । नतिजालाइ लिएर विध्यार्थी तनाव त भएकाे हुन्छ नै,…
गर्भावस्थामा महिलाको शरीरमा पानीको मात्रा ७ लिटरसम्म बढ्छ । पर्याप्त मात्रामा पोषिला खानेकुरा खाएका स्वस्थ गर्भवतीको तौल ११ देखि १३…